Adeega HIV dhaqamada kala duwan iyo Cagaarshowga (Multicultural HIV and Hepatitis Service) waxay la shaqeeyaan bulshooyinka dhaqamada kala duwan leh iyo adeegyada caafimaadka ee NSW si loo yareeyo saameynada HIV iyo fayruska cagaarshowga.
Warbixinta HIV iyo Cagaarshowga
Warbixinta oo wax ka badan 20 luuqadood
Taageerada labada luuqad ee dadka qaba HIV
Ololaha warbaahinta jinsiyada iyo warbixinta
Dhisida xirfadaha ka midka ah shaqaalaha caafimaadka iyo bulshada
Barnaamijyada iyo illaha abulshooyinka ay saameysay
Baro wax badan oo ku saabsan shaqada iskaashigeena ee bulshooyinka ay saameysay si ay uga caawiso iyaga wax ka qabadka HIV iyo fayruska cagaarshowga.
Waxaan ka qeybgalinaa bulshooyinka qaabab kala duwan ee ixtiraamto dhaqanka iyo qiyamyada bulsho walbo.
Shaqaalaha Daryeelka Caafimaadka
Hel warbixinta luuqadaha badan iyo illaha sare u qaadida caafimaadka si ay u taageerto shaqadaada ee dadka ka imaaday taariiqaha muhaajirka iyo qaxootiga.
Waan kula shaqeyn karnaa si loo hormariyo adeegyadaada ee bulshooyinka dhaqamada kala duwan.
Fiiri barnaamijyadeena warbaahinta hadeer oo hel warbixinta illaha, taariiqaha, tirikoobyada iyo wargelinta tilmaamaha joornaaliistayaasha.
Helida jaraa’idyadeena Diversity News iyo iska diiwaangelinta inaad ka warqabtid dhammaan aqbaaraha MHAHS.
HIV Cagaarshowga B Cagaarshowga C